Nahoana isika no manangana Vaomieram-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2018 4:31 GMT
Tonian-dahatsoratra miady hevitra momba ny paikady fanoratana nandritra ny Fihaonambe 2017.
Tsy hita izay lazaina! Manangana Vaomieram-piarahamonina ny Global Voices handehanana ho any amin'ny hoavintsika.
Nahoana isika no manao izany? Inona no dikan'izany? Ary ahoana no fomba fiasany?
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nivory tao anaty fisintahana nandritra ny herinandro ny mpikambana ao amin'ny biraom-pitantanana niresahanay “sary lehibe” momba ny hoavin'ny GV—lohahevitra momba ny paikady famatsiam-bola, ny maodelim-pitantanana sy ny fomba fanaovana ny fitantarana. Raha nahita valinteny sasantsasany izahay, dia nahita fa tsy afaka mamaritra ny hoavin'ny GV araka izay tianay, eny fa na ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana aza.
Izany satria, ambonin'ny rehetra, vondrom-piarahamonina iray ny GV. Manao ny safidy tsara indrindra isika rehefa afaka miresaka miaraka momba ireo lohahevitra ireo
Saingy tsy mora araka ny mahazatra ny miasa miaraka amin'ny maha vondrom-piarahamonina—nanjary goavana loatra isika hahombiazana amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny alalan'ny imailaka na sehatra fandefasan-kafatra.
Tamin'ny fivorianay farany tao Mexico City tamin'ny volana Marsa lasa teo, nanapa-kevitra hanangana Vaomiera izahay, andiam-pikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina hanolo-tena handinika sy hifanakalo hevitra, ao anatin'ny saina tony, ireo olana lehibe tsy maintsy atrehintsika eo ampamolavolana ny drafitra hiantrehantsika ny hoavy.
Ahoana no hananganana ny Vaomiera? Ahoana no hiasan'ny rehetra miaraka?
Ny fanantenanay dia handray anjara ireo karazam-pikambana ao amin'ny fiarahamonina Global Voices—ireo avy amin'ny karazan-toerana, fomba fijery ary andraikitra ato amin'ny vondrom-piarahamonina. Rehefa tafatsangana ny Vaomiera, dia hampiasa vondrona Google iray manokana hanaovana fampitankevitra ankapobeny sy karazam-pilazana.
Hanokana tapa-bolana hifanakalozan-kevitra isaky ny lohahevitra efatra (voalaza etsy ambany) isika. Isaky ny lohahevitra, hanomana sy hizara andian-gazety heverina ho voavakin'ny mpikambana ao amin'ny Vaomiera ny ekipan'ny biraom-pitantanana. Hampiasa lisitra mailaka sy seha-dahatsary Zoom izahay hanaovana adihevitra sy fifanakalozan-kevitra.
Amin'ny fiafaran'ny tapa-bolana, hilaza ny faniriantsika momba ny lohahevitra izahay amin'ny fampiasana ny sehatra latsa-bato D21. Manome fitaovana latsa-bato mavitrika ny D21 (anisan'izany ny safidy “tsy mifidy” sy “mifidy) sy ny fanarahamaso ny vokatra. Hatomboka indray ny dingana avy eo, miditra amin'ny lohahevitra manaraka.
Ny dingana dia natao handraisana feo marobe sy tsy hanilika araka izay azo atao. Na ho 50, 150 na 1000 ny olona ao amin'ny Vaomiera, dia hanandanja ny sosokevitry ny mpikambana, satria ho afa-mandray anjara amin'ny fomba mitovy isika—mamaky, miadihevitra sy mandinika ny hevitsika tao amin'ny latsa-bato. Manombana izahay fa mila manokana ora 1-2 isan-kerinandro ho amin'izany ny mpikambana tsirairay ao amin'ny Vaomiera.
Inona no tiantsika lazaina raha milaza hoe “fakan-kevitra”?
Ny andraikitry ny Vaomiera dia ny hizara sy hiresaka ankitsim-po ireo lohahevitra ifotoran'ny Global Voices. Tsy ho andry mpanapa-kevitra ny Vaomieram-piarahamonina, fa vondrona iray handinika ireo lohahevitra efatra lehibe momba ny fitantanana, famoahan-dahatsoratra, ny endriky ny fandraisana anjara, ary ny famatsiam-bola, manoritra ny soatoavin'ny GV. Ny vokatra avy amin'ireo fandinihana ireo no hampahafantatra amin'ny fanapahan-kevitra horaisinay momba ny hoavintsika.
Note to Lingua translators: The descriptions above also appear in the overview page for the Council. If you've translated that page, all you need to do here is cut and paste 😉
Handinika lohahevitra efatra ny Filan-kevitra:
Amin'ny fanapahan-kevitra mahasahana ny fifandaminana manontolo (tsy hoe ho an'ny ekipam-paritra iray na ekipam-pitenenana iray ihany) mijanona hoan'ny biraom-pitantanan'ny Global Voices ihany ny fahefana manapa-kevitra. Tokony hotsinjaraina ve ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fitantanana, sa havondrona bebe kokoa?
Misahana lohahevitra maro isika amin'ny fitantarantsika. Ahafahan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo manoratra lohahevitra isan-karazany izany, saingy miteraka fitakiana lehibe ho an'ireo tonian-dahatsoratra ihany koa izany. Tokony hotazonintsika ve izany fomba fitantarana izany? Sa tokony hanakely kokoa ny zavatra ifantohana ka hitantara ny lohahevitra sasany amin'ny fomba lalindalina kokoa?
Fiarahamonina lavitry ny fanilikilihana isika. Midika izany fa manofana sy mitari-dalana mpanoratra tsy mbola za-draharaha mitovy soatoavina amitsika sy maniry te-handray anjara isika. Izany no ahafahantsika mihazona ny fiarahamonintsika hahitana karazan'olona, saingy mametra ihany koa ny fotoanansika sy ny fahafahantsika hamokatra tantara avolenta sy ireo fanentanana fanandratan-teny izany. Tokony hotazomintsika ve izany haavom-piombonana izany? Sa tokony hanao ho laharam-pahamehana ireo mpandray anjara manana fahaizana na talenta manokana isika any amin'izay sehatra mahaliana antsika?
Ireo fikambanana tsy governemantaly no tena mpanohana ny Global Voices. Ara-potokevitra isika tsy mandray fanohanana mivantana avy amin'ny sampan-draharaham-panjakana, ary mailaka isika miala amin'ny mety isian'ny vola azo avy amin'ny dokambarotra. Mihalasa maodely sarotra tohanana ara-bola maharitra ny fiankinana voalohany amin'ny famatsian'ny miahy tena, noho ny fiovana matetika amin'ny laharam-pahamehana sratejika avy amin'ireo orinasa mpanasoa manohana antsika. Tokony hanova tetipanorona ve isika amin'ny fanangonam-bola mba ahafahantsika manohana ny asantsika araka izay tratra?
Fanamarihana ho an'ireo mpandika-teny ao amin'ny Lingua: Ny famaritana eo ambony dia mipoitra koa ao amin'ny pejy voalohany an'ny Vaomiera. Raha efa nandika izany pejy izany ianao, dia mila manao “tapahana-apetaka” fotsiny 😉
Hosahanin'ny ekipan'ny birao sy ny filankevi-pitantanana ny dingana fanapahan-kevitra farany, amin'ny fampiasana ny tolokevitry ny Vaomiera ho toy ny tondrozotra mba hanapahana izay mifanaraka indrindra amin'ny soatoavina sy hamaliana ny filàn'ny vondrom-piarahamonintsika.
Feno fanantenana izahay fa hahasoa antsika izany dingana izany tsy tahaka ny adihevitra antsisitsisiny, adihevitra any amin'ny mailaka sy fitsapan-kevitra nahazatra antsika tamin'ny lasa, satria manolotra rafitra mavitrika ahafahan'izay rehetra te-hanokana fotoana sy hery handraisany anjara amin'ny Vaomiera izany. Fantatsika ihany koa fa tsy ho tonga lafatra izany! Saingy manantena izahay fa hanampy anay hahatratra ny fehinkevitra matanjaka ny Vaomieram-piarahamonina ary hanangana tondrozotra ho an'ny hoavy.
Mahaliana ve? Te-hanokana fotoana sy hery ho an'ny hoavin'ny GV? Raha mbola tsy nanao izany ianao, dia fenoy ny Taratasy Fangatahana ho mpikambana ao amin'ny Vaomieram-piarahamonina hatramin'ny 30 Aogositra! Ary araho hatrany ny lahatsoratra amin'ny herinandro ho avy .